Porno internetka: Dawlada Cusub ee UK - Shuminta - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » kale »Porno on the internet: Dawlada Cusub ee UK Shrink - xnxx
Muuqaalka internetka: Dawlada Cusub ee Dawlada Ingiriiska - xnxx
FacebookFacebook3 TwitterTwitter2 Google plusGoogle plus6
X LinkedInLinkedIn1 EmailEmail0 RedditReddit1 StumbleuponStumbleupon1
Xukuumadda Ingiriiska ayaa qorshaynaysa in ay ciqaabto boggaga porno oo u oggolaanaya in ay ka yaryihiin sanadaha 18. Qiyaasta ayaa qaylinaysa difaacayaasha xoriyada.
Ma jeceshahay maqaalkan? La wadaag!
By Ludovic Delory.
Dawladda waxay isku dhejisaa cagaha nolosha qoyskaaga. Aan ku faraxsaneyn inaan isku dayo saxankaadageerashkaagaboorsadaada ou sariirtaada guurkawuxuu hadda qorsheynayaa inuu wax ka qabto waxa ugu qaalisan adiga: caruurtaada.
Ma tihid waalidiin? Taasina way kugu walwaleysaa. Sababtoo ah xuquuqda aasaasiga ah ee qof kasta oo bilaash ah iyo mas'uulka ah waa shayga weerarradan.
Porn ee wadnaha ee bartilmaameedka
Cadaadiska warshadaha iyo, dhammaanba, difaacayaasha xuquuqda shakhsiyeed, dawladda Ingiriiska dib loo dhigay soo bandhigida "Porn Block" oo lagu dhawaaqay bilawga bisha Abriil. Mashruuc muran dhaliyay, oo looga golleeyahay in la mamnuuco fiirinta goobaha pornographic ee ka yar sanadaha 18. Meelaha aan u hoggaansamin sharciga cusub ayaa lagu ganaaxay ganaax ah 250 000 pounds (290 000 euros).
Si xur ah, dadka isticmaala Internetka ee Ingiriisku doonaya inay galaan bogga pornographic waa in si maadi ah cadee inay leeyihiin wax ka badan sanado 18. "Miisaan" macnaheedu waa inaanay ku filneyn kaliya inaad gujiso "Waxaan ka weynahay banner 18". Nidaamka réclame cinwaanka emailkaaga iyo isku day inaad hubiso sheegashadaada adigoo sii wata inta aad ka fiirineyso da'daada adoo isticmaalaya SMS - haddii ay lagama maarmaan tahay - kaadhka amaahda ama liisankaaga darawalnimada. oo ka mid ah "Porn Pass" xataa waxaa laga heli karaa iibsashada dukaamada qaarkood si loo caddeeyo - dawladda oo dooneysa hanti-gaaga - in aad tahay qof da 'yari ku filan si aad u daawato filim ama filim.
Le Websaydhka la xidho ayaa leh madadaalo si ay u tilmaamaan dhammaan sababaha fikradani ay khaldan tahay. Ugu horreyn sababtoo ah muwaadin kasta oo ka mid ah Majalladiisa, oo leh VPN simulating xiriirka ka yimid wadan kale, waxay heli karaan meelo aan qadarin ah oo dejiya webka. Marka labaad, sababtoo ah mamnuucidda dawladu waxay keenaysaa habdhaqan isku mid ah (oo sharcigu sharci darro ahaa). Ugu dambeyntii (iyo tan ugu muhiimsan), sababtoo ah xukuumadda ingiriisku waxay awood u yeelan kartaa inay helaan xog ururin dhamaystiran oo dadka ka mid ah oo la tashanaya goobaha po * n.
Ma aragtaa xiga soo socda?
Caruurtaadu waxay daawanayaan xayawaanka webka: yaa mas'uul ka ah?
Faragalinta qayaxan ee sharci-dajiyaha ee mawduucan ku saleysan xogta dhabta ah. Sida laga soo xigtay hal daraasad wadajir ah ee Jaamacadda Middlesex iyo NSPCC - hay'ad samafal ah oo loogu talagalay ilaalinta carruurta - 65% ka mid ah da'yarta 15-16 sano 48% of 11-16 sano aragnay qaawan online. 28% carruurta waxay guud ahaan ku dhici halka 19% doondooni si iskood ah.
Su'aasha muhiimka ah, ee ku xayiran daraasaddan cilmibaadhista, ayaa lagu soo koobi karaa erayo kooban: yaa ka masuul ah ilmahaaga? Adiga Ama dawladda?
Xaalado badan, Xeer-ilaaliyaha ayaa mas'uul ka ah in la badalo doorarka waalidiinta ee ku jira goobta gaarka loo leeyahay. Laga soo bilaabo arrimahan soo socda ayaa raacaya waajibaad sharci ah oo xagga seedahaaga ah, sida kan ka reebaya sigaar cabista baabuurka marka ay joogaan ama haddii kale waajibaadka xiro kursigooda. Qirashada aabaha ee sharafta bani'aadamnimada ayaa haatan ku qarsoonaa qashinka sharciga.
Ciqaabin la'aanta mas'uuliyadda
Tani waa su'aal dhif ah oo laga doodi karo: illaa heerkee sharciga waa in uu farageliyo berrinta casriga ah? Haddii uu GPA yahay, xirashada burqa, guurka oo dhan, sharci-dajiyuhu wuxuu raadiyaa oo kaliya inuu ku soo rogo awoodiisa, isagoo aan ka helin doodahaas habka kaliya ee qiimaha leh: kan madax-bannaani.
Faransiiska, sharci-dajiyuhu wuxuu mamnuucayaa dadka da'da yar inay la tashadaan porno. Inkastoo ay inta badan da 'yihiin si ay u leeyihiin, sharci ahaan, jinsi. Sida Daniel Borrillo ayaa sheegay in uu ku qoray:
Haddii mid ka mid ah waxay qaadataa hal dhibic ka mid ah aragtida macaamiisha ah ee qaawan, waxaanu isla markiiba heli khilaaf ah oo u dhaxeeya inta badan, tan iyo markii ay ku lifaaqan sano 15 for dhaqanka galmada iyo 18 sano daawashada filim anshax xumo. macquulka ah sharciga waxaa sidaas vitiated by gudeed aasaasi ah: bulshadeena ma ogola inay arkaan si kastaba ha ahaatee waxa ay u oggolaanaysa.
Jacaylka dheddiga ah ee "jirkeygu waa iska leh" macno wanaagsan marka ay timaaddo isbarbar dhiga shaqsiyaadka shakhsiyaadka daaqadaha xorriyadda ay bixiso gobolka. Xagga dambe ayaa go'aamiya "Good Good" oo aan joojin xuduudda ay tahay in uu noqdo, oo ah in la yidhaahdo Just. Xayawaanku wuxuu go'aamiyaa doorashooyinka shakhsiyaadka wuxuuna beddelayaa rabitaankooda xorta ah. Waxaa intaa dheer, go'aanada aan cidna dulmin. Waxqabadyadani waxay sidoo kale run tahay meelaha ay ka midka yihiin ciqaabidda macaamiisha dhilleysiga ama Dhibaateynta galmada.
(...) bulshadu maaha inay ku qasbaan in ay qas galaan noloshiisa qofkale, oo ka soo horjeeda doonistiisa, oo kaliya iyada oo ujeedadiisu tahay ama u diideyso in uu naftiisa waxyeeleeyo.
Si aad wax u yeertoNooc kasta oo ka mid ah filimada, dhilleysiga, isticmaalka maandooriyaha ama khamriga, waa xoriyad shakhsi ah. Magaca mabda 'maxay tahay mabda'a Qaranku ku soo rogayaa su'aalahan? Xudduudaha ay soo bandhigeen qoraallada caanka ah ee dhidibada ayaa hadda burburay. Taariikhda ayaa na baraysa in nidaamyada isbahaysiga ay doonayaan, iyada oo aan laga reebin, si ay u burburiso qaylo-dhaan ka hoos marin harqoodka waxa ay hoggaamiyayaashoodu ugu yeedheen "beesha". " Xornimada gobolkawaxay xusuusisaa Pierre Lemieux, wuxuu xaq u siinayaa xuquuqda Dowladaha in ay ka saaraan muwaadiniintooda". Heerka waa la dhammeeyaa: shaqsiyaadka aad ka hubsatid waligeed ma dhaafin noloshaada, go'aankaaga, noloshaada.
Si loo caddeeyo dimoqraadiyadeeda, jinsiyadeeda, isku-duubnaanta ka-hor-tagga, ayaa maanta lagu qorey dagaalo aan shakhsiyan lahayn, bulsho ku habboon oo bilaash ah, inay qaadaan. Dunida bilaashka ah, maaha GPAama caawiyay isdilayama dhillaysiga waa in ay ahayd mawduuc siyaasadeed. Oggolaanshaha iyo aragtida iyo dabiiciga ah ee is-lahaanshaha waxay ku filnaan lahayd inay xalliso khilaafaadka macquulka ah ee macquulka ah.
Maanta, iyada jidhka noqonaya haybaddii par fal siyaasadeed. uu doonista xorta ah oo sheegaya in ay jawaab u ah weeraro joogto ah waa sharci eed, "xaq-fikirka" ama oo dhan wada hoos magaca "bulshada" noqdo fal caasinimo. Waa loolan iyo abbaarta. Helitaanka qaawan videos waa in la ogaadaa in masuuliyadda shaqsiyaadka. Ma aha dawladda.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.contrepoints.org/2019/04/07/340857-porno-sur-internet-nouveau-recul-du-gouvernement-britannique
Pasta Lobster, Chorizo ​​iyo Peas - New York Times